कोरोना जित्नेलाई दुबोको माला ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना जित्नेलाई दुबोको माला !
काठमाडौँ, ९ असार । कोरोना जितेर घर फर्कन लागेका सिन्धुलीका ३ जना युवालाई दुबोको माला लगाएर विदाई गरिएको छ । उनीहरुलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि दुबोको माला लगाएर सिंगारेर बिदाई गरिएको हो ।
भारतबाट आएका उनीहरु सिन्दुधीलको क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । क्वारेन्टिनमा बसेपछि गरिएको स्वाव परिक्षणमा उनीहरुलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना पुष्टि भएसँगै उनीहरुलाई सिन्धुली अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो ।
उनीहरु भर्ना भएको २२ दिनपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । उनीहरुको पछिल्लो पटकको परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । डिस्चार्जपछि उनीहरुलाई फूलका गुच्छा एवम दुवोको माला लगाएर विदाइ गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौली अस्पताललाई रु एक करोड ४३ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि अस्पताललाई उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।
अस्पताल सुृदढीकरण, आँखा सेवा, डायलायसिस सेवा, एम्बुलेन्स खरिद, औषधि खरिदलगायतका शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु एक लाख ५० हजार, एनसीयु एनआइसीयु सेवा निरन्तरताका लागि रु १० लाख दुई हजार, डायलायसिस सेवा सञ्चालन तथा निरन्तरताका लागि रु १० लाख दुई हजार, नसर्ने रोग ९क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला, दीर्घश्वासप्रश्वास रोग० तथा मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा निरन्तरताका लागि रु नौ लाख, अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम, बृहत् आकस्मिक प्रसूति तथा नवशिशु स्याहार सेवा सुदृढीकरणका लागि रु ३४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै १५ श्ययाको अस्पताललाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि रु ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जग्गा अभावकै कारण अस्पतालको स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । हाल १५ श्ययामा सञ्चालित अस्पताललाई ५० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न कम्तीमा ३५ देखि ८० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अहिले दमौली अस्पताल १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तनहुँका साथै कास्कीको पूर्व र लमजुङको पश्चिम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको अस्पताललाई थप सुविधासम्पन्न बनाउन स्तरोन्नति आवश्यक रहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टसहित तीन चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण